बूढीगण्डकीको कामलाई गति दिन सरकारले बढायो सक्रियता, अघि बढ्ला त आयोजना ? | Notebazar
बूढीगण्डकीको कामलाई गति दिन सरकारले बढायो सक्रियता, अघि बढ्ला त आयोजना ?
काठमाडौं। ८श्रावण, २०७८, शुक्रबार / Jul 23, 2021 07:15:am
काम शुरु गर्न ठिक्क भएको आयोजनाको निर्माणको ढाँचामा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । एक चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सम्पर्क बाहिर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन जटिलता भने कायमै छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने कि प्रतिस्पर्धामा कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा उच्च राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
यो सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल आयोजनाको रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् ।
सरकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि आयोजनाको काम किन अगाडि बढ्न सकेन रु भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिएन् । स्थानीय आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई नियमानुसार खुशी बनाएर काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
घर तथा जग्गाको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको आयोजना प्रभावितको भनाइ छ । स्थानीयको मागअनुसार मन्त्री भुसालले ह्रासकट्टीबापतको रकम जनतामा जाने पैसा भएकाले नकाट्न आग्रह गरे ।
आयोजना प्रभावितको पुनःस्थापना गर्ने गरी जलाशय वरिपरि चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारिएको भए पनि हालसम्म कुनै काम शुरु हुन सकेको छैन । “पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाको काम तत्काल अघि बढाउनुस्”, मन्त्री भुसालले भनिे, “जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ लाग्नुस् ।”
सो क्रममा मन्त्री भुसालले सरकार आयोजनालाई अघि बढाउन गम्भीर रहेको र सोहीअनुसार पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको स्थानीय काम अघि बढाउन आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिँदै हाल उत्पन्न कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा तीव्रता दिइने बताए । फिल्डफुबमा विवरण भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गा, ह्रसकट्टी, भौतिक संरचना र घरगोठका विषयमा शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री भुसालसँग सोही विषयमा छलफल भएको संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।